वानडे सिरिज : दोस्रो म्याचमा भारत हार्नुका तीन कारण
By क्रिकेट पाटी	 On Mar 27, 2021
काठमाडौं- इंग्ल्याण्डसँगको एकदिवसीय सिरिजअन्तर्गत दोस्रो खेलमा भारत ६ विकेटले पराजित भएको छ । गएराति सम्पन्न खेलमा भारतले फराकिलो हार ब्यहोरेको हो ।
भारत हार्नुका मुख्य तीन कारण
१. सुस्त र खराब सुरुवात : भारतले दोस्रो म्याचमा पनि सुस्त र खराब सुरुवात गर्‍यो । उसले दुवै ओपनर शिखर धवन (४) र रोहित शर्मा (२४)लाई सस्तैमा गुमायो ।
साथै, भारतले ३० ओभरसम्म सुस्त प्रदर्शन गर्‍यो । उसले ३० ओभरसम्म १४२ रन बनाएको थियो । यो अवस्थामा इंग्ल्याण्डले भने १९४ रन जोडिसकेको थियो । खराब र सुस्त सुरुवातले पनि भारतले भारत हार ब्यहोर्न बाध्य भयो ।
२. स्टोक्स, बेयरिस्टो र रोयको आक्रामक ब्याटिङ : दोस्रो म्याचमा पनि इंग्ल्याण्डले शानदार सुरुवात गर्‍यो । पहिलो विकेटका लागि जोनी बेयरिस्टो र जेसन रोयबीच १ सयभन्दा बढी रनको साझेदारी बन्यो ।
दोस्रो खेलमा बेयरिस्टाले १२४, बेन स्टोक्सले ९९ र रोयले ५५ रनको आक्रामक पारी खेले । उनीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण भारत पराजित हुन पग्यो ।
३. पाँच बलरको कमी : दोस्रो खेलमा भारतीय बलर महँगा सावित भए । कुलदीप यादव (८४ रन), कुणाल पाण्ड्या (७२ रन), भुवनेश्वर कुमार (६३ रन), प्रशिद्ध कृष्णा (५८ रन) र शार्दुल ठाकुरले ५४ रन खर्चिए । यीमध्ये पाण्ड्या अलराउन्डर हुन् ।
दोस्रो खेलमा हार्दिक पाण्ड्याले बलिङ गरेनन् । पाँच बलरलाई नखेलाउँदा पनि भारत पराजित हुन पुग्यो ।
एकदिवसीय सिरिजभारतविरुद्ध इंग्ल्याण्ड